I-ToutApp: UkuKhangela ukuThengisa, iiTemplate kunye noVavanyo | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 3, 2013 NgoMgqibelo, Disemba 12, 2015 Douglas Karr
Kwintlangano enkulu yentengiso, abameli abathengisayo abaphumayo banendawo engafikelelekiyo yokunxibelelana nemfumba yezikhokelo ngamanye amaxesha ukunxibelelana nala mathuba mabini aza kuguqula. Iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo ezinje ngomxhasi wethu kwiLungelo lokunxibelelana lawula amanqaku akhokelayo kunye nokondla Unxibelelwano lwabantu, kodwa abasebenzi abathengisayo basadinga ukuvelisa ii-imeyile zabo 1: 1 ukunxibelelana buqu nezikhokelo zabo.
bonke liqonga lokukhawulezisa ukuthengisa elinceda iqela lakho lokuthengisa ukuba libhale ii-imeyile ngokukhawuleza, ukulandelela ukubandakanyeka kunye nokuvala ezinye izivumelwano. I-Tout isebenza nezixhobo zakho ezikhoyo kubandakanya i-Gmail, i-Outlook, kunye ne-Salesforce.
Ukondla ngoku -Ukuphela kokulandela umkhondo weembono, ukucofa kunye neempendulo, unokuthatha inyathelo ngokuthe ngqo kwiFree feed yakho. Ngokucofa kube kanye, yenza umnxeba, ucime i-imeyile okanye ujonge idatha yeCRM yonke endaweni enye.
Ukulandelwa kwe-imeyile -Fumana ukubonakala kwexesha lokwenyani kwinto eyenzekayo ngeemeyile zakho. Yazi xa umntu ejonga, ecofa okanye ephendula kwi-imeyile.
UkuKhangelwa kwiWebhusayithi -Fumana ukuqonda ukuba unomdla kwintoni ithemba lakho. Nje ukuba ucofe ikhonkco kwikhonkco kwi-imeyile yakho, uyazi ngokuthe ngqo xa betyelele iwebhusayithi yakho, iphepha lamaxabiso okanye iZiko loNcedo emva koko.
Ukulandelwa kwesiQhoboshelo -Nokulandela umkhondo weSincamathiselo, awusoze ushiywe ebumnyameni. Jonga ukuba ithemba livule okuncamathiselwe kwakho, kwaye ngawaphi amaphepha abawajongileyo.
Sebenzisa konke ngaphakathi kweKlayenti yakho ye-imeyile -Ungayisebenzisa i-Tout kwisicelo sethu esisekwe kwiwebhu, isicelo sethu esiphathwayo, kwi-CRM yakho okanye nangaphakathi kwabathengi be-imeyile i-Gmail kunye ne-Outlook.
Idityaniswa neNtengiso kunye nezinye iiCRMs -I-Tout idityaniswa ngokuthe ngqo kwi-Salesforce, Highrise, CapsuleCRM kunye neBatchbook, ilungelelanisa abafowunelwa bakho kwaye igcina ngokuzenzekelayo umsebenzi wakho usexesheni.
tags: unxibelelwano lokuthengisai-imeyile yokuthengisaUkunika amandla ukuthengisabonkeZonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuyila isicelo esigqibeleleyo sefowuni